Dowlada Iran oo ugu baaqday Madaxweynaha cusub ee Mareykank joe Biden in laga qaado cunaqabateynta, islamarkaana dib ugu biirto heshiiska nukliyeerka. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Dowlada Iran oo ugu baaqday Madaxweynaha cusub ee Mareykank joe Biden in...
Dowlada Iran oo ugu baaqday Madaxweynaha cusub ee Mareykank joe Biden in laga qaado cunaqabateynta, islamarkaana dib ugu biirto heshiiska nukliyeerka.
Wasiirka Arimaha Dibada ee Iran Mohammad Javad Zarif ayaa sheegay in Iran ay si buuxda u fulin doonto heshiiskeeda Nukliyeerka ee 2015 hadii Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden uu cunaqabateynta ka qaado Tehran, taasi oo uu Zarif ku sheegay in si deg deg ah loogu fulin karo “saddex amar fulineed”.
Biden wuxuu ballanqaaday inuu dib ula midoobi doono heshiiskii taariikhiga ahaa ee 2015 – oo ay ku heshiiyeen lixda quwadood ee adduunka ee loo yaqaan P5 + 1 – haddii Iiraan ay sidoo kale ku soo noqoto fulinta.
Laakiin diblomaasiyiinta iyo falanqeeyayaasha Siyaasada ayaa sheegay in aysan u badneyn in ay dhacaan habeen kaliya Arrintan maadaama labada dhinac uu midba midka kale ku eedeynayo Qalalaadka iyo ka bixida balanqaadyadii lagu hashiiyay inkastoo wali Iiran ay ku adkeysanayso dalab ah in “waxyeelada” Tehran ay la kulantay cunaqabateynta Mareykanka, ay Washington ka bixiso mag’dhaw si ay dib uga soo kabato lacagaha saliida ee ka lumay.
Previous articleDuqeymo ay diyaaradaha Israa’iil ay ka geysteen gudaha dalka Syria ayaa waxaa ay ku dileen seddex askari, oo ka tirsan Ciidamada Iran.
Next articleSuudaan oo qorsheyneysa inay muwaadiniinteeda kala baxdo gobalka Tigreega ee Itoobiya.